သစ်သီးမြင်တာ နဲ့ ကြောက်တတ် တာကြောင့် အတင်းလာ ကျွေးရင်တောင် အသေသာခံလိုက်မယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော လိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သစ်သီးမြင်တာ နဲ့ ကြောက်တတ် တာကြောင့် အတင်းလာ ကျွေးရင်တောင် အသေသာခံလိုက်မယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြော လိုက်တဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ
ဖြူဖွေးဥတဲ့ အသားအရေလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မြင်သူတိုင်း ချစ်မဝ ဖြစ်နေရသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ဆောင်နေပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးနေကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာလည်း ကြော်ငြာ လေးတွေ ရိုက်ကူးနေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတိုင်းကိုလည်း ပရိသတ်တွေကို အမြဲဝေမျှပေးနေသူပါ။
မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း ဆောင်းယွန်းရဲ့ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ စာလေးတွေ ရေးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ သစ်သီးမြင်တာနဲ့ကြောက်တတ်တာကြောင့် အတင်းလာကျွေးရင်တောင်အသေသာခံလိုက်မယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကလည်း ” ဘဝ ဝဋ်ကြွေးကလည်းတော်တော်ဆိုးတာပဲနော် ..
ဘာလို့သစ်သီးတွေကို ​ ကြောက်ရတာလဲ.? တစ်ခါတစ်လေကျရင် ခုဘဝကို မြန်မြန် ကုန်ဆုံးသွားစေချင်တယ်.. နောက်ဘဝဆိုတာ ရှိရင် အခုလို သစ်သီးတွေကို ကြောက်မှာမဟုတ်ဘူး ” ” သစ်သီးနဲ့ပတ်သတ်ရင် အသေခံရမယ်​ဆို အသေပဲ ခံမယ်.. အဲ့သစ်သီး ဘယ်တော့မှ မစားဘူး. တောင်းပန်ပါတယ် . သစ်သီးနဲ့ပတ်သတ်ပီး blameတာတွေ တော်ပါတော့.. ကိုယ့်အားနဲချက်နဲ့ကိုယ်ပါ. ဘယ်သူ့ကိုမှ လည်း မထိခိုက်ပါဘူး.. တောင်းပန်ပါတယ်..” ဆိုပြီး ရေးသားထားပြီး ဆောင်းယွန်းရဲ့ ပရိသတ်တွေကလည်း သူမကို အားပေးစကားတွေ ပြောထားကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိနိုင်အောင် ဒီသတင်းလေးကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် ကူးယူတင်ဆက် ပေးလိုက် ရပါတယ်နော်။
Source and Photo Crd- Saung Yoon San’s Facebook Account
ျဖဴေဖြးဥတဲ့ အသားအေရေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး ျမင္သူတိုင္း ခ်စ္မဝ ျဖစ္ေနရသူေလးကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းသမီးေခ်ာေလး ေဆာင္းယြန္းစံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမဟာ အႏုပညာလႈပ္ရွားမႈေတြကို တျဖည္းျဖည္းနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခဲနက္ အားေပးေနၾကတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာမွာလည္း ေၾကာ္ျငာ ေလးေတြ ႐ိုက္ကူးေနရတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြတိုင္းကိုလည္း ပရိသတ္ေတြကို အၿမဲေဝမွ်ေပးေနသူပါ။
မၾကာေသးခင္ မိနစ္ပိုင္းေလာက္ကလည္း ေဆာင္းယြန္းရဲ႕ လူမႈကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာမွာ စာေလးေတြ ေရးထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ သစ္သီးျမင္တာနဲ႔ေၾကာက္တတ္တာေၾကာင့္ အတင္းလာေကြၽးရင္ေတာင္အေသသာခံလိုက္မယ္လို႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကလည္း ” ဘဝ ဝဋ္ေႂကြးကလည္းေတာ္ေတာ္ဆိုးတာပဲေနာ္ ..
ဘာလို႔သစ္သီးေတြကို ​ ေၾကာက္ရတာလဲ.? တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ ခုဘဝကို ျမန္ျမန္ ကုန္ဆုံးသြားေစခ်င္တယ္.. ေနာက္ဘဝဆိုတာ ရွိရင္ အခုလို သစ္သီးေတြကို ေၾကာက္မွာမဟုတ္ဘူး ” ” သစ္သီးနဲ႔ပတ္သတ္ရင္ အေသခံရမယ္​ဆို အေသပဲ ခံမယ္.. အဲ့သစ္သီး ဘယ္ေတာ့မွ မစားဘူး. ေတာင္းပန္ပါတယ္ . သစ္သီးနဲ႔ပတ္သတ္ပီး blameတာေတြ ေတာ္ပါေတာ့.. ကိုယ့္အားနဲခ်က္နဲ႔ကိုယ္ပါ. ဘယ္သူ႔ကိုမွ လည္း မထိခိုက္ပါဘူး.. ေတာင္းပန္ပါတယ္..” ဆိုၿပီး ေရးသားထားၿပီး ေဆာင္းယြန္းရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမကို အားေပးစကားေတြ ေျပာထားၾကတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပရိသတ္ေတြလည္း သိရွိႏိုင္ေအာင္ ဒီသတင္းေလးကို တစ္ဆင့္ ျပန္လည္ ကူးယူတင္ဆက္ ေပးလိုက္ ရပါတယ္ေနာ္။
Previous post ဒီဇင်ဘာ (၂၀) မှ စ၍ အအေး ပိုမည့် တိုင်း နဲ့ ပြည်နယ် များ စာရင်း
Next post အလန်းစား ဖက်ရှင် နဲ့ မိလွန်း နေ တဲ့ ဝါဆိုမိုးဦး